Former World Cup referee named for violence - The Zimbabwean
Former World Cup referee named for violence
HARARE Zimbabwes 2002 World Cup referee, police officer Superintendent Brighton Mudzamiri has been fingered as one of the perpetrators of violence against diamond panners at the Chiadzwa diamonds fields in Marange.
In the 32-page reportDiamonds and Clubs: the Militarised Control of Diamonds and Power in Zimbabwe by Partnership Africa Canada (PAC), Mudzamiri is the only top police officer named among the perpetrators of violence.??
However, Mudzamiri denied that he was the police officer in question.??
I was never stationed in Chiadzwa in 2009. I was stationed here (Support Unit in Harare) where I have always been based and so I cannot comment on that report, Mudzamiri said.??
The report said: While identifying individual perpetrators remains a problem, one exception to this is District Commissioner Brighton Mudzamiri, who earned small notoriety during the 2002 FIFA World Cup for keeping law and order on the pitch as a FIFA referee.?More recently he has been implicated in numerous atrocities in the Chiadzwa area, including at least three deaths.